Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Daawo Sawirada: Weerar Midi loo adeegsaday oo ka dhacay Magaalada London
August 19 2017 00:59:57
Daawo Sawirada: Weerar Midi loo adeegsaday oo ka dhacay Magaalada London
Waxaa xalay magaalada London ee Caasimada Britain ka dhacay weerar dhaliyay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, weerarkan ayaana loo adeegsaday midi sida ay sheegeen Saraakiisha booliiska magaalada London.
Nin Dhalinyaro ah oo da'diisa lgu qiyaasay 19-sano jir ayaa ka dambeeyay weerarkan midida loo adeegsaday , waxa uuna ku dilay inta la xaqiijiyay qof Haweeney ah halka uu ku dhaawacay lix qof oo kale.
Weerarkan ayaa ka dhacay Fagaaraha Russell Square ee kuyaala Bartamaha Magaalada London, Ciidamada booliiska ayaana toogasho ku dhaawacy ninkii ka dambeeyay Weerarka kaa oo hada lagu daweenayo xarun Caafimaad.
Wali si rasmi ah looma oga waxa uu weerarkan ka dhacay magaalada London uu salka ku hayo, waxaana socda baaritaano ay laamaha dambi baarista Britain ku ogaanayaan weerarkan iyo wax dhaliyay.
Weerarda loo adeegsado midiyaha iyo weerarada kale ee Hubeesan ayaa kusoo badanaya Wadamo kuyaal Qaarada Yurub, waxaana horey Weeraro qasaaro badan ka dhasheen uga dhaceen Wadamada Faransiiska , Jarmalka iyo Biljamka.
· mamaan on August 04 2016 ·